Chelsea Oo Dhameystirtay Saxiixa Ross Barkley - Ceelhuur Online
Home > Ciyaaraha > Chelsea Oo Dhameystirtay Saxiixa Ross Barkley
January 5, 2018 Hafsa Haji540
Chelsea ayaa ku dhawaaqday inay lasoo saxiixatay ciyaaryahanka qadka dhexe ee Everton Ross Barkley heshiis shan sanno iyo bar ah.
Warar soo baxayay ayaa sheegaya in Chelsea ay ku dhowdahay inay la soo wareegto ciyaaryahan inta lagu jiro saacadaha kama dambeysta ah ee xagaagaan suuqa kala iibsiga, Barkley ayaana doorbidayay inuu ka tago kooxda ilaa uu ka soo kabsaday dhaawac cajirka ah.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa haatan ku soo laabtay tababarka, Chelsea ayaa cadaadisay ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga, taasoo lagu qiimeeyo 15 milyan ginni.
24-jirkaan ayaa u sheegay website-ka rasmiga ah ee kooxda: “Aad ayaan u faraxsanahay, waan sugayaa waana ku faraxsanahay inaan ku soo bilowdo.
“Si aad u hesho bilow cusub oo cusub sida Chelsea, waa wax aan la rumeysan karin, waxaan rajeynayaa inaan sii wado meeshii aan kaga tagay dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, waxaana rajeyneynaa inaan horumar sameyno, islamarkaana aan goolal badan dhalino”.
Barkley ayaa ka tagay Everton isagoo dhaliyay 27 gool 179 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan sidoo kale ku guuleystay 22 kulan oo uu u saftay England.
Ciyaaryahanka ayaan diyaar u aheyn inuu ciyaaro kulanka FA Cup ee Chelsea habeenka sabtida ee Norwich City.
Luke Shaw Oo Filaya Inuu Sii Joogo Manchester United
Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Javier Hernandez Oo Muujiyay Dhaawacii Xumaa Ee Soo Gaaray
Neymar Oo Qalinka Ku Duugay Heshiis Cusub
October 21, 2016 Hafsa Haji
Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Bixitaanka Javier Mascherano
January 23, 2018 Hafsa Haji